Izindaba - UShandong Gaoqiang unikele ngemali yezemfundo
UShandong Gaoqiang unikele ngemali yezemfundo
"Ngibonga iMenenja Jikelele uZhu, sibonga uShandong Gaoqiang, sizofunda ngokuzikhandla ngemuva kokungena enyuvesi bese sibuyisela umphakathi ..." "," Kubonga iMenenja uZhu, sibonga inkampani ngokusisiza ngomsebenzi wokukhanyisa wezigodi zaseJijianpeng .. ., ukubonga okuqotho awukwazi ukuyeka ukuzwa.
Umcimbi wokunikela ububanjelwe eKomidini leDolobhana laseJijianpeng ePingyi County ngo-Agasti 26. UMnu Zhu Mengshou, umphathi jikelele weShandong Gaoqiang New Material Technology Co., LTD unikele ngezinsiza zokukhanyisa kanye nezinto zokwakha kubafundi abahlanu abahlwempu naseJijianpeng ePingyi County. Bangaphezu kuka-10 abantu abebehambele umcimbi wokunikela ngemisebenzi emibili yenhlalakahle yomphakathi, okubandakanya uZhang Guanlin, iphini likanobhala wekomidi lamaKhomanisi e-Pingyi County, uJiao Dale, unobhala weKomidi Leqembu le-pingyi County, uJi Dayong, unobhala wokuqala we-Jiujianpeng, kanye UMeng Ding, iphini likanobhala weJijianpeng.
Lapho kunikelwa khona, uGM Zhu unikeze u-4, 000 yuan kumfundi ngamunye kwabahlanu abahlwempu obezongena enyuvesi. Uxhumane nabafundi abahlwempu, wayekuqonda ngokujulile ukufunda kwabo nempilo yabo, wabelana ngesipiliyoni sakhe sokukhula nabafundi, futhi wabafundisa ukuthi ngaso sonke isikhathi babonge abakufundile futhi babuyisele idolobha lakubo nomphakathi ngezenzo ezingokoqobo.
Ngasikhathi sinye, Ngemuva kokufunda isimo somnotho seJijijianpeng Village engxoxweni noNobhala Ji, iMenenja uZhu inikeze u-10,000 yuan uxhaso lwezezimali lwezindawo zokukhanyisa kulo muzi. Umqondisi wedolobhana laseJijianpeng uLiu Yuefeng ubonge uGM zhu ngalesi senzo sothando, futhi wakhipha isitifiketi sokuhlonipha uZhu, idolobha lathumela unobhala wokuqala kanobhala wesizini owanikeza iphenathi yebhizinisi lothando iZhu.
Ekupheleni komcimbi, iMenenja Jikelele uZhu uthe: Kusukela yasungulwa cishe eminyakeni eyishumi eyedlule, inkampani yaseGao Qiang ibilokhu ihambisana nomqondo "wobuqotho, ukusebenza kanzima". Ngenkathi ifeza ukuthuthuka kwezomnotho kwenkampani, inaka ukubaluleka okukhulu ukukhokhela umphakathi, isekela ngenkuthalo imbangela yokunakekela isizukulwane esilandelayo, futhi ihlela ukwenza ngenkuthalo imisebenzi ethile yenhlalakahle yomphakathi minyaka yonke ngokuzayo. Ngasikhathi sinye, ibuye icele osomabhizinisi abaningi nabantu abanakekela umphakathi ukuthi bahlanganyele emisebenzini yenhlalakahle yomphakathi
UShandong Gaoqiang akasoze ayikhohlwa inhloso yasekuqaleni, agcine inhloso yakhe, aqhubeke nokubamba iqhaza ezinhlelweni zenhlalakahle yomphakathi, asize abantu abaningi abadinga usizo, badlulise uthando, baqhubeke nokubhala inhliziyo enkulu, bafake isandla esahlukweni esisha se umphakathi!
Isikhathi Iposi: Sep-21-2020